hoy i Georget Alexandre, minisitry ny tontolo iainana. Fanamby goavana no atrehina amin’ny taona 2020 satria hamboly zana-kazo 60 tapitrisa entina hankalazana ny fetim-pirenena. Nanokana ivontoerana lehibe hitobiana zana-kazo 80 tapitrisa ny ministera izay hozaraina maimaimpoana manomboka ny 19 janoary 2020. Hiditra ao anatin’ny « Guiness Mondial » isika Malagasy raha tojo izany ka antsoina ny vahoaka Malagasy na any ivelany aza hamboly zana-kazo, hoy izy. Ny zava-dehibe dia tsy ny fambolena azy ireo fa ny fanaraha-maso sy fiarovana ny fanirin’ireo hazo. Marihina fa avy nanatrika ny COP 25, fihaonambe iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana, i Georget Alexandre. Niavaka ny hetsika tamin’ity andiany ity satria nisy fihaonamben’ireo minisitry ny tetibola maneran-tany. Raha tsy misy fiovana dia hisitraka 150 tapitrisa dolara isika amin’ny tontolo iainana aty amintsika. Nandritra ny tomban’ezaka nataony dia niantso ireo mpiara-miombonantoka ny minisitry ny tontolo iainana mba hanome fahatokisana an’i Madagasikara mahakasika ny « fonds vert pour le climat ». Mba Madagasikara mivantana no hisitraka io fanampiana io fa tsy mandalo amin’ireo vondrona samihafa intsony, hoy hatrany ny fanazavana.